ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အရှင်ဝီရသူနှင့် စစ်တပိုင်းအစိုးရ
ဘာအ၀တ်ပဲ ၀တ်ထားဝတ်ထား သူတို့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပြလိုက်ပါ..
လို့ဆိုထားတော့...။
ကြောင်ရေချိုး..ဖြစ်ခြင်းမက ဖြစ်နေသူဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ။
These are your thoughts. Some of them are wrong.
ဘာလုပ်လုပ် စစ်အစိုးရရဲ့ လှည့်ကွက်တွေပဲ လို့ ပြောနေသမျှ စစ်အစိုးရက ထင်တာထက် ပိုတော်နေတာလား.. ဝေဖန်တဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေကပဲ သိပ်တော်နေတာလား..တစ်ခုခုတော့..တစ်ခုခုပဲ..အဟက်..ဟက်..ဟက်..
Win San said...
မိမိကိုယ် မိမိအရင်သုံးသပ်ပါ ၊ သူများကိုသုံသပ်တာက မှန်ချင်မှ မှန်နိုင်ပါမည် ၊
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသား ပိုင် ခွင့်ရှိ
ပါတယ် ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်(သို့) လူတစ်စုရဲ့ လွတ်လပ်မူဟာ တစ်ခြား လူတစ်ယောက်(သို့) လူတစ်စုရဲ့ လွတ်လပ်မူကို မထိပါးသင့်ဘူး ဒီလိုထိပါး လာရင်တော့
တရားမျှတမှု ဆိုတာ အဲဒီလူ့အဖွဲ့ အစည်းမှာ မရှိတော့ဘူး
ဒီတော့ ဗိုလ်ကျအနိုင် ကျင့်မှုတွေ ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပဲ
you can see in 1975 small book ----fight ----- like this way......but i don't know why very old method useful in myanmar and no one teach myanmar people, why? what they want..............
တော်လှန်ရေးကို စာပေက တဆင့် ၀ါဒဖြန့် ချီတာကောင်း ပါတယ် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ လည်းမှားကောင်း မှားမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်း မုန်းတီးရေး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး မိထ္တီလာမှာ မွတ်တွေလည်း သူကူညီခဲ့ တာဘဲ မိထ္တီလာ ဒုက္ခသည် တွေကို ကူညီကြတာ အမှန်ပြောရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက သူတွေ အများစုပါ နောက်ပြီး ဆရာတော်က မန္တလေးမှာ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး ကိုတက်တက် ကြွကြွ ဆောင်ရွက် ခဲ့တာဘဲ အယ်ဂျာဇီးယားရဲ့ ၀ါဒဖြန့်မှိုင်း ကိုတတ်ယောင်ကား ကြီးတွေ မှိုင်းမိသွား တာ အတော်ဆိုးတယ် အခုရခိုင်မှာ NGO အမည်ခံ တွေ အတော်များများ ရခိုင်ဒုက္ခသည် တွေကို မထောက်ပံ့ဘဲ မွတ်တွေဘဲ ကူညီနေတာ ဖေါ်ထုတ်ကြပါလား ဆရာတော်က ဒါတွေ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တာ OIC အနေနဲ့ ၀င်မရတော့ ပိုက်ဆံများများ သုံးပြီး NGO တွေအဖြစ် ခေါင်းမြီးခြုံ ၀င်လာကြတာ ဒါတွေ ပြောလေ ဆရာတော်ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး မဲကြရော အရေးကြီးတာက တိုင်းပြည်မျက်နှာ ကြည့်ဘို့ပါ
Tin Myo Thet said...
ပြောတာ တွေ ကောင်း ကြ ပါ တယ် သတိပေး ချင် တယ် ယခု comment ပေး ကြသူတွေ က ကျွန် တော် တို့ နဲ့ အ တူ နေလှ ဘယ် လောက် မှ မရှိဘူး ဒါ ကြောင့် နောက် မျိုး ဆက် ရှေ့ ရေး အတွက် ဆရာ တော် ပြော တာ ဘဲလေ အား လုံး တွေး ပြီး ကူ ညီ နိင် ကြ ပါ စေ